Ny mpamono an'i Netflix 'Misy olona ao an-tranonao' dia misaron-tava amin'ny tarehin'ireo niharan'izy ireo - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny mpamono an'i Netflix 'Misy olona ao an-tranonao' dia misaron-tava amin'ny endrik'ireo niharan'izy ireo
Ny mpamono an'i Netflix 'Misy olona ao an-tranonao' dia misaron-tava amin'ny endrik'ireo niharan'izy ireo
Ianao no fahavalonao ratsy indrindra ... ary mpamono anao amin'ny tranga sasany
by Trey Hilburn III Septambra 13, 2021 3,112 hevitra
Misy anaram-boninahitra vitsivitsy izay natao handefasana ny hazondamosinao. Ity iray ity, sahala amin'ny mampihoron-koditra 70's sy 80's exploiter mampitovy izany. Titles like Aza miditra amin'ny lakaly or Nilaza tamiko Andriamanitra samy manana peratra mahatsiravina ho azy ireo. Ankehitriny, an'i Netflix Misy olona ao an-tranonao mamerina izany fandrahonana izany ihany.
Ny tranofiara ho an'i Patrick Brice (mikisaka) Misy olona ao an-tranonao eto mba hiasa mihoatra ny ora amin'ny famitsahana antsika. Izy io dia misy mpamono olona izay tia mitafy saron-tava amin'ilay olona novonoiny. Miresaka momba izany teknolojia fanontana 3D ambaratonga manaraka izany. Hey, raha Darkman mahavita azy, toy izany koa isika.
Ny synopsis ho an'ny Misy olona ao an-tranonao mandeha toy izao:
Nifindra avy tany Hawaii hankany Nebraska, tanàna kely mangina i Makani Young hiaina miaraka amin'ny renibeny ary hamita ny fianarany amin'ny lisea, saingy rehefa manomboka ny fanombohana ny diplaoma dia voataon'ny mpamono olona ny mpiara-mianatra aminy hampiharihary ny tsiambaratelon'izy ireo maizina indrindra amin'ny tanàna iray manontolo, mampihorohoro niharam-boina nefa nanao saron-tava ny endriny. Miaraka amin'ny lasa miafina azy manokana, Makani sy ny namany dia tsy maintsy mahita ny mpamono alohan'ny hahatongavany ho azy ireo. MISY olona ao anatin'ny tranonao dia mifototra amin'ny tantara an-tsoratr'i Stephanie Perkins 'New York Times izay mitovy anarana aminy ary nosoratan'i Henry Gayden (Shazam!) Ho an'ny efijery, Notarihin'i Patrick Brice (Creep) ary novokarin'i James Wan's Atomic Monster ( The Conjuring) sy ny fihodinan'i Shawn Levy 21 (Zavatra vahiny).
Patrick Brice dia iray amin'ireo talen'ny tiako indrindra miasa ankehitriny. Ilay tovolahy dia tsara manerana ny vatany miasa. Ny sarimihetsika, mikisaka ary ny tohiny dia nampangovitra hatramin'ny fotony. Saingy, ny sanganasan'i Brice dia manana an'io karazana vazivazy tena manokana io hatrany, na dia amin'ny fotoana sarimihetsika mampatahotra azy indrindra aza, ary toa feno an'io io iray io.
Tsy andrintsika izay hahitantsika an'ity ary soa ihany fa tsy hiandry ela intsony isika! Tonga amin'ny Netflix ny 6 Oktobra, ara-potoana amin'ny fialamboly amin'ny Halloween.